Misy Boostrap 2.2 | Avy amin'ny Linux
alaintm | | fandaharana
Ny fandinihako ny sakafoko anio dia hitako fa ao fiveloves.com, fa ny dikantenin'i Boostrap 2.2. Ity malaza Rafitra CSS isan'andro dia mahazo mpanaraka bebe kokoa izy noho ny tombony omeny amin'ny fampiraisana ireo singa ilaina amin'ny fizotran'ny fampandrosoana eo alohan'ny tranokala na modely ho an'ny WordPress, Joomla o Drupal.
Teboka iray hafa manohana an'ity rafitra ity ny fanohanana Famolavolana tranonkala adaptive o manaiky Design izay manome sy ohatra iray izay ananantsika ao amin'ny lohahevitry ny tranokalanay. Tsara homarihina fa Boostrap dia miainga amin'ny fitantanana typography, grids, amin'ny alàlan'ny singa mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny tranokala mankany amin'ny plugins ho an'ny JQuery. Noho izany rehetra izany dia tsy mahagaga raha nanangana azy ho an'ny fampandrosoana ny lohahevitra ny Desdelinux.
Anisan'ireo zava-baovao azontsika ahitàna fa namboarina ireo endrika vaovao, ankoatry ny kilasy ilaina mba hanomezana ny sary boribory, boribory ary polaroid, na dia antenaina aza fa tsy tohanan'ny Internet Explorer 7 ary 8 ho an'ny fanohanana tsy dia tsara amin'ny famaritana ny sisin'ny boribory.
Ao aminy bilaogy, ireo singa ao amin'ny famotsorana ary ny rohy ho an'ny marary mitsika avy amin'i github.
Amin'ny fehin-kevitra dia afaka milaza aho fa misy marindrano maro ho an'ny CSS amin'izao fotoana izao ary misy afaka safidy mety, saingy amin'ny zavatra niainako dia hitako tao Boostrap ny vahaolana raha ny hevitro no feno indrindra amin'ireo efa misy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » Boostrap misy 2.2
Mahatalanjona, tsy fantatro izany, misaotra tamin'ny fandefasana azy!
alaintm dia hoy izy:
Tsy mampino dia kely, nampiasa rafitra CSS vitsivitsy aho ary ny marina no feno indrindra, satria mampifangaro ny zava-drehetra ary mandray ny tsara indrindra amin'izay misy.
Mamaly an'i alaintm
Amin'ny teny anglisy dia "famolavolana tranonkala mamaly".
Marina izany, na dia mazàna no hanafoanan'izy ireo izany.
Misy mahalala tutorial Bootstrap tsara amin'ny teny Espaniola?
Tutorial toy izany dia tsy nampiasaiko tamin'ny fianarany, fa mitady ao amin'ny google ny loharanom-pahalalana amin'ny bootstrap twitter ary minoa ahy fa hanana izay ilainao ianao.
Vonona, hitady sy hijery aho.
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara.
Ny rakitra Bootstrap mitovy dia tsy amin'ny Espaniôla ihany koa?
tsia, amin'ny anglisy izany fa tsy hitako izay olana, takatry ny saina tokoa
Tetikasa antontan-taratasy amin'ny Espaniôla ity, saingy ny kinova 2.0 na dia manampy be aza.
Amaury dia hoy izy:
Efa nakariko ny loharano avy amin'ny github fa tsy azoko apetraka ao anaty andohalambo, rehefa manandrana manangona azy aho dia manome ahy ny lesoka
/ bin / sh: fitsaharana: baiko tsy hita
manaova: *** [manangana] Error 127
Efa mametraka JSHint avy ao aur,
Fa ny lesoka dia mitovy
Valiny amin'i Amaury
Ampiasao ity url ity https://github.com/twitter/bootstrap/zipball/master ary midira ao amin'ny lahatahiry dokam-barotra ary misy izay ilainao rehetra amin'ny referansa, ny ambiny ao amin'ny js sy css.
rsantander dia hoy izy:
Mampiasa an'ity Framework ity aho ankehitriny ary tena ilaina tokoa, amin'ny maha-mpamorona endrika maty mosary ahy, saingy namonjy ahy ny Twitter Bootstrap.
Ny zavatra ratsy dia ireo maodely tsy mandeha amin'ny android na amin'ny sasany izay efa nanandramako.
Mamaly an'i rsantander